मृत्यु कुरेर वसेकी जुम्ली युवतीको स्वास्थ्य मन्त्री थापालाई लेखेको यस्तो छ हृदयविदारक पत्र « Deshko News
मृत्यु कुरेर वसेकी जुम्ली युवतीको स्वास्थ्य मन्त्री थापालाई लेखेको यस्तो छ हृदयविदारक पत्र
खासमा जुन दिन मलाई भक्तपुर स्थित वीपी क्यान्सर हस्पिटलले मृत्युको पुर्जा दिएर घरमा बसेर मृत्यु कुर्न भन्यो। त्यो दिन, मेरो यो उन्नाईस बर्षे कलिलो मन कस्तो भयो होला। हजुरलाई के भनु म । तर म त्यसदिन खुब रोए। धुरूधुरू रोए । नरोएर के गरू म । मेरो मुटु यति शोकाकुल र छियाछिया भएको थियो कि । त्यो कुरा शब्दमा कसरी लेखु म । बस रूने बाहेक मसँग केही थिएन उपाए। र अहिले पनि छैन ।
त्यो दिन वा मेरो मरणको दिन सम्झन्छु । साचिँ त्यस दिन मेरा सारा आफ्नत कसरी रोलान । कति भक्कानिएलान । म कल्पनै गर्न सक्दिन । मुख्यकुरा आफुले खाईनखाई यो उन्नाईस बर्षसम्म हुर्काउने मेरो बाआ मा कति रोलान । उनिहरूलाई सम्झाउने मानिसहरूले के भनेर सम्झाउलान। म सोचिरहेको छु।
म पनि यहि देशमा जन्मे । यहि देशमा हुर्के । जहाँ तपाईं पनि जन्मनु भो र हुर्कनु भो । तर तपाईंलाई एउटा कुरा सोध्न मन छ। तपाईं बिरामी हुँदा वा विरामी लगेर हस्पिटल जादा हस्पिटलमा कति माया गर्छ ? कति आफ्नोपन देखाउँछ ? तपाइलाई याद होला । अनुभव होला। तर मलाई त त्यस्तो कुराको अनुभवै भएन । यादै भएन । र, त हजुरलाई मेरो मृत्युको जानकारी दिईरहेको छु । खासमा मैले धेरै दुख पाए । धेरै आपत खेपे । पाएको दुख सम्झिदा लाग्छ म यो देशको नागरिक हैन जस्तो ।
मेरो आँखाले कति हो कति बेथितिहरू देखे । त्यो बेथितिको सिकार भए । र, सम्झे बेथितिहरूले म जस्ता अरू हरू पनि दिनदिनै मरिरहेका होलान । अनि मनमनै सम्झेर तपाईलाई जानकारी गराउन मन लाग्यो र चिठी लेखिरहेको छु । हुन त म एक दिन मर्ने नै थिए । तर केही समय चाडै मर्ने भए । यसैले म दुखि त छु भन्नै पर्यो । हो म दुखि छु । अनि म मर्नु पहिले तपाईलाई भेटेर केही कुरा गर्न चाहान्छु । खासमा हाम्रो देशमा लापरबाही किन हुन्छ । बुझेर मर्न चाहान्छु ।
हुन त म बाचेर पनि देशको लागि के गर्न सक्थे होला र । तर म मर्ने पक्का भए पछि देशको हो या आफ्नो खुब माया लागिरहेको छ। किन हो खै । मैले देखेका बेथितिहरूप्रति मेरो मनमा धेरै घृणा छ । लाग्छ म अब त केही दिन पछि मर्छु पनि होला । तर मैले मेरो उपचार गर्दा पाएको दुख हजुरलाई सबै भन्न चाहन्छु । न कि म जस्ता यो देशका नागरिकले म जस्तो दुख नपाउन । पीडा नपाउन । बेथितिको सिकारले मृत्यु नपाउन ।